China Potassium Fulvate factory sy mpamatsy | Lemandou
Leonardite Potassium Fulvate dia karazana hetsika mineraly voajanahary voajanahary amin'ny potash, an'ny zezika maitso, avo lenta ary mahavonjy angovo, potipotika microporous foamed, ao anatin'izany ireo fanafody, dia manana ny mampiavaka azy eo noho eo.
Fumvate potasioma biolojika
Biolojika potasioma biokimika
Solubility amin'ny rano (fototra maina)
Asidra Humic total (fototra maina)
Asidra folvika (fototra maina)
K2O (fototra maina)
Fampiharana biôlôjika biolojika momba ny bioteknolojia maoderina mba hambolena ny sombin-kazo ho toy ny akora, ny fanamasinana biolojika, ny fanomanana mahomby ny akora asidra fulvika toy ny arina. Izy io dia mety levona tanteraka amin'ny rano, asidra ary alkaly, miaraka amina karazana singa marobe sy singa marobe miaramiasa miaraka, fa tsy flocculation.
Ao amin'ny 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, kitapo 25 kg
Misy fonosana namboarina
1.Potassium Fulvate dia afaka manatsara sy manamboatra ny tany amin'ny tany mahantra sy ny famoizam-po mafy, ary mora very ny otrikaina. Amin'ny maha organika tena tsara azy dia afaka manatsara ny firafitry ny tany sy manamafy ny firafitry ny tany ny asidra fulvic potassium. Ny asidra fulvika dia mitambatra amin'ny ion-kalsioma ao anaty tany mba hamoronana rafitra Agglomerate miorina, ny rano, ny zezika, ny entona ary ny hafanan'ny tany dia azo ovaina, ary ny bakteria mahasoa amin'ny tany dia mihabetsaka, ka miteraka bakteria manimba ao amin'ny ny tany dia azo fehezina, amin'ny fanatsarana ny fanoherana ny voly, ary ny fanoherana ny fitifirana sy ny masiran'ny tany ateraky ny zezika be loatra mandritra ny fotoana maharitra.
2. Fakana sy fampiakarana (zana-ketsa)
Mampiroborobo ny fivoaran'ny rafitry ny voly ary mampitombo ny tahan'ny fitsimohany. Ny asidra potassium fulvic dia manan-karena otrikaina isan-karazany. Ny faka vaovao dia azo jerena ao anatin'ny 3-7 andro fampiasana. Izy io dia afaka mandrisika ny fizarazarana sy ny fitomboan'ny sela meristematika fatratra ao amin'ny rafitra faka, mampiroborobo haingana ny zana-ketsa, mampitombo ny fakany faharoa, ary manatsara haingana ny fihinanan'ny zavamaniry ny otrikaina Fahafahana mampifanaraka ny rano, mampiroborobo ny fizarana sela ary manafaingana ny fitomboan'ny vokatra.
3. Hatsarao ny fanoherana ny voly. Ny zava-maniry dia tsy maintsy iharan'ny fitsapana toy ny hafanana ambony sy ny haintany, ny tondra-drano, na ny bibikely sy ny aretina mandritra ny fitomboany. Ny asidra fulvika potasioma mineraly dia afaka mampiroborobo ny fitomboan'ny zavamaniry, manatsara ny fanoherana maharitra, ary manitsy ny toetoetran'ny zavamaniry amin'ny zava-tsarotra mba hanoherana ny fihenjanan'ny fahoriana ivelany. Amin'ny vanim-potoana ara-dalàna, ny fitomboan'ny zezika misy asidra potasioma potasioma mineraly dia afaka manatsara ny fanoherana ny voly ary mampihena ny fatiantoka ateraky ny fitsapana. Ny fikarohana dia naneho ihany koa fa ny fifangaroan'ny asidra potassium fulvic potassium sy ny pestisides dia mety hisy fiantraikany synergistic ary afaka hampihena ny fisian'ny bibikely sasany.
4.Hatsarao ny fampiasana zezika. Ny asidra fulvika potasioma mineraly dia afaka mamorona sarotra amin'ny urea mba hahatratrarana ny vokatry ny fifehezana azota sy ny famotsorana tsimoramora; ny fangaro mifangaro amin'ny zezika fosfat sy asidra potasioma potasioma mineraly dia afaka mampihena ny vokatry ny kalsioma, manezioma, vy, ary ion-by hafa amin'ny phosforus Miorina izy io ary mampiroborobo ny fitrohana fosforosy amin'ny faka; ny vondrona miasa ao amin'ny asidra potasioma mineraly fulvic dia afaka mandray ion-potasioma ary misoroka ny famoahana potasioma. Izany dia mampiroborobo ny fitomboan'ny zavamiaina bitika, manala fosforus, manalefaka ny potasioma ary manamboatra azota, manatsara be ny tahan'ny fampiasana azota, phosforus ary potasioma, maherin'ny 40%.
Tehirizo amin'ny toerana mangatsiaka sy maina ary misy rivotra.
Manaraka: Asidra Fulvika